गेमप्रोन HWID स्पूफर Online अनलाइन गेमहरूको लागि Undeteected HWID परिवर्तक - गेमप्रोन
गेमप्रॉन Hwid स्पूफर
विगतबाट हार्डवेयर आईडी प्रतिबन्ध हटाउन हाम्रो गेमप्रोन HWID स्पूफर प्रयोग गर्नुहोस्!
त्यहाँ बस्नुहोस् र पाउउट नगर्नुहोस् किनकि तपाईंलाई प्रतिबन्धित गरिएको छ, यसको बारे केही गर्नुहोस्! आज हाम्रो HWID स्पूफर किन्नुहोस् र खेलमा फिर्ता आउनुहोस्।
चीजहरूको स्विingमा फिर्ता हुन बानी भइरहेको छ? १ हप्ता उत्पादन कुञ्जी खरीद गरेर पनि लामा धोका दिनुहोस्।
गेमप्रॉनले तपाईंलाई लामो समय सम्म तपाईंलाई पहुँच गर्न दिनेछ! अनौंठाहरू पार गर्नुहोस् र आज १ महिनाको उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्।
HWID Spoofer Gamepron जानकारी
यदि तपाइँ तपाइँको मनपर्ने खेल बाट हार्डवेयर आईडी प्रतिबन्धित गरिएको छ भने, बाधाहरु तपाइँ थोरै दु: खी हुनुहुन्छ। यो ठीक छ, हामी बुझ्छौं कि तपाईले धेरै मन पराउनुहुने खेलमा ह्याक गर्न सक्षम हुनु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ र हामी इन्टरनेटमा सबैभन्दा भरपर्दो HWID स्पूफर प्रदान गर्दैछौं। WinThatWar ह्याकहरू अनलाइन मात्र अग्रणी प्रदायक होइन, किनकि हाम्रो HWID स्पूफर WTW बजारमा # १ स्पूफर उपकरण हो!
सबै सबै लोकप्रिय शीर्षकहरूले यो HWID स्पूफर (वैलोरन्ट, हाइपर स्केप, रस्ट, फोर्टनाइट, PUBG, एपेक्स महापुरूष, र अधिक धेरै प्रयोग गर्न सक्दछन्), त्यसैले तपाईले धोखा खोजिरहनु भएको जस्तो भए पनि, हामी मद्दत गर्न सक्दछौं।
सबै EasyAntiCheat, BattlEye र ड्यूटी खेल को कल को समर्थन गर्दछ।
हाम्रो HWID Spoofer का लागि इंजेक्शन प्रक्रिया धेरै सरल छ, सबै कौशल-स्तर प्रयोगकर्ताहरूलाई हार्डवेयर आईडी प्रतिबन्ध मा प्राप्त गर्न मौका दिदै। त्यहाँ एक पेशेवर स्पूफिंग एनिमेसन उपकरण भित्र समावेश छ, र खेल को टन समर्थन गरीन्छ।
HWID स्पूफर गेमप्रोनको बारेमा
सबैभन्दा भरपर्दो एचडब्ल्यूआईडी स्पूपरको वरिपरि कार्यान्वयन गरेर हाम्रो धोका दिन्छ। एक हार्डवेयर आईडी प्रतिबन्ध मा जानको एक मात्र तरीका भनेको नयाँ कम्प्युटर खरीद गर्नु हो, वा तपाईं केवल यो उपकरणको पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सबै पैसा खर्च गर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ। जबकि यो उपकरणले तपाइँलाई प्रतिबन्ध हटाउन मद्दत गर्दछ, कहिलेकाँही प्रतिबन्ध हाम्रो उपकरणको घटकको हिस्सा हुन सक्छ। यसको मतलब यो हो कि खाताहरू पहिले जस्तो थियो त्यस्तै प्रयोग गर्न सक्षम छैनन्, र पहिले प्रतिबन्धित गरिएको थियो फेरि तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ।
किन अन्य प्रदायकहरूमा HWID स्पूफर WTW प्रयोग गर्ने?
अन्य प्रदायकहरूसँग, तपाईंको अघिल्लो प्रतिबन्धको ट्रेसहरू उनीहरूको उपकरणहरू प्रयोग गरिसके पनी उपस्थित हुन सक्दछन्। यदि कुनै ट्रेसहरू बाँकी रहन्छ भने, तपाईं फेरि तुरुन्तै प्रतिबन्धित हुन सक्नुहुनेछ (र तपाईं सर्वरमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न जब प्रतिबन्ध टेक्निकल रूपमा यी ट्रेसहरूको कारण सक्रिय छैन)। हाम्रो HWID स्पूफरले मात्र ट्रेस छोड्ने बेवास्ता गर्दछ, तर यसले तपाईंलाई तपाइँको धोखा तरिकाको नतीजामा अधिक नियन्त्रण दिन्छ। जब तपाईं WinThatWar सँग हुनुहुन्छ भने प्रतिबन्धहरूले तपाईंलाई रोक्न सक्दैन।
HWID स्पूफरले तपाइँको हार्डवेयर आईडी स्पूफ्ड राख्नेछ जब सम्म तपाइँ विन्डोज रिस्टार्ट हुँदैन, जहाँ तपाइँ अघि बढ्न सक्नुहुन्छ र फेरि स्पूफिंग प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नुहुन्छ!
तपाईंको HWID मा परिवर्तनहरू गर्नु कहिल्यै सजिलो भएको छैन, किनकि हामीले खेल्ने क्रममा हामी आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको आईडी खराब गर्न दिन्छौं। हाम्रो HWID स्पूफरसँग सम्बन्धित इन-खेल मेनू केवल प्रयोग गर्न सजिलो छैन, तर यसले खेलाडीहरूलाई अनुकूलन गर्न र खेल बन्द नगरीकन समस्याहरूलाई पार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। जबकि अन्य व्यक्तिहरूले ग्राहक समर्थनसँग कुरा गर्नुपर्नेछ र उनीहरूको प्रतिबन्धसँग सम्झौता गर्नको लागि प्रतिक्षा खेल खेल्नुपर्नेछ, तपाईं केवल हाम्रो HWID स्पूफर सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ र जति चाहानुहुन्छ त्यस्तै खेल्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो Alnex स्पूफर प्रयोग गर्नाले हाम्रो उपकरणलाई मनपराउनको लागि अपरेसन अनुमति दिनेछ: डिस्क ड्राइभहरू, मदरबोर्ड्स, नेटवर्क एडाप्टरहरू, म्याक ठेगाना, र सिरियल नम्बर।
HWID के हो?
तपाईंको हार्डवेयर आईडी (HWID) परिचयकर्ताहरूको एक सेट हो जुन एन्टि-चीट्स तपाईं को हो भनेर निर्धारण गर्न प्रयोग गर्दछ।
यी पहिचानकर्ताहरू तपाईंको कम्प्युटर भित्र रहेको हार्डवेयरको टुक्राहरूको आधारमा आधारित छन्। उदाहरण को लागी, तपाइँको मदरबोर्ड एक विशेष धारावाहिक को लागी नियुक्त गरीएको छ, र परिवर्तन गर्नका लागि एक मात्र तरीका यसलाई स्पूफिंग वा नयाँ मदरबोर्ड प्राप्त गरेर हो।
"स्पूफर" के हो
स्पूफर सफ्टवेयरको एक टुक्रा हो जुन तपाईंलाई नयाँ HWID दिन्छ। सामान्यतया, एक स्पूफर चलाउनु पर्नेछ हरेक चोटि तपाईले प्रणाली पुन: सुरु गर्दा कुन स्पूपर प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ।
के मैले एक स्पूफर प्रयोग गर्नु पर्छ?
तपाईंले सँधै स्पूफर प्रयोग गर्नुपर्दैन। यदि तपाइँ कहिल्यै खेल्नु भएको खेलबाट HWID प्रतिबन्धित गरिएको छैन भने, र तपाइँको धोखा पूर्ण रूपमा पत्ता लगाइएको छैन भने, त्यसो भए तपाइँलाई स्पोफरको आवश्यक्ता पर्दैन। यदि तपाईंले HWID प्रतिबन्धित गर्नुभयो भने, तपाईंले आफ्नो HWID लाई स्पूफ गर्न आवश्यक पर्दछ ताकि तपाईं तत्काल प्रतिबन्धित हुनुहुन्न।
तपाइँको पूर्वनिर्धारित HWID प्रतिबन्धित हुनबाट जोगिन यो सँधै स्पूफलाई पनि सल्लाह दिइन्छ।
तिनीहरूले तपाईंलाई महानता प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्दैनन्! प्रतिबन्ध पनि होईन, गेमप्रॉन प्रयोगकर्ताहरूलाई बदला लिन रोक्न सक्दैन, किनभने हाम्रो गेमप्रोन एचडब्ल्यूआईडी स्पूफरले तिनीहरूलाई कुनै पनि समयमा कुनै कार्यमा फिर्ता दिनेछ।
हाम्रो GamePron HWID Spoofer प्रयोग गरेर आफैलाई केही स्वतन्त्रता दिनुहोस्!
गर्न तयार प्रतिबन्ध तपाइँको पीसी हाम्रो गेमप्रोन Hwid Spoofer को साथ?